Juventus oo xalay daawanaysay 3 laacib oo ay doonayso! – Gool FM
Juventus oo xalay daawanaysay 3 laacib oo ay doonayso!
Raage February 22, 2017
(Leverkusen) 22 Feb 2017 – Juventus ayaa sida lasoo werinayo waxay sahan u dirtay kulankii Bayer Leverkusen-Atletico Madrid si ay u indha indhayso Yannick Carrasco, Julian Brandt iyo Benjamin Heinrichs.
Sida uu dhigayo As, Juve ayaa sahankeeda u dirtay BayArena si ay u eegaan 3-da laacib, sida garab-weerarka Atletico Madrid ee Carrasco iyadoo uu 23-jirkan reer Belgium uu xubin muhim ah u ahaa kooxdiisa, isagoo u dhaliyay 12 gool, 4 goolna dhigay 34 kulan oo rasmi ah oo fasalkan u saftay Atleti.
Ragga kale ee ay Juve u sahan tagtay waa da’yarta reer Jarman sida Brandt iyo Heinrichs. Brandt waa 20-jir dhanka bidix ee khadka dhexe ka dheela, kaasoo kasoo baxay akadamiyaha barbaarinta ee Wolfsburg, wuxuuna dhaliyay 3 gool isagoo dhigay 6 gool, 27 kulan.
Heinrichs waa dadab bidix wuxuuna 20 jirsanayaa dabayaaqada todobaadkan isagoo horraanba saftay 26 kulan, isagoo bixiyay 2 kubadood oo gool loo sarrifay.
AC Milan-ta cusub oo doonaysa Cesc Fabregas
''Waa ii sharaf inaan xirto funaanadda xulka qaranka Talyaaniga'' - Moise Kean